Than Lwin Editor – Than Lwin
Call Us Today: +959 261447376
Than Lwin Editor
By Than Lwin Editor
In Activities, Download
ပြည်သူတွေပြောတဲ့ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ သုတသနအစီရင်စာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း( ၃၁ သြဂုတ်၊ ၂၀၂၀)
သံလွင်( Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့ကစီစဉ်တဲ့ ပြည်သူတွေပြောတဲ့ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ သုတသနအစီရင်စာ ကို ယနေ့ ၃၁ သြဂုတ်လ၊၂၀၂၀။ နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင်အစိုးရအဖွဲ့ ဦးလှမိုးအောင်(ဝန်ကြီးချုပ်)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စွာလှိုင်(လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး)၊ဦးဌေးဝင်း(စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး)၊ ဦးဝင်းဌေး(လျှပ်စစ် စွမ်းအင် စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး)၊ ဒေါက်တာစိုးဝင်း(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး)၊ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူ(ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး)နှင့် ဦးထွန်းလွင် (တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး) တို့တက်ရောက်ပြီး၊ သံလွင်အဖွဲ့မှ ဦးသီဟသူ(ဒါရိုက်တာ)နှင့် ဦးရဲအောင်(OMI)တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။၎င်းသုတေသနအစီရင်ခံစာတွင် ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းကာလတွင်ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းသော ကောင်းမွန် သည့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်စီမံမှုအပြောင်းအလဲများဖော်ဆောင်၊ အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် ၁။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး(ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ)အပေါ် ပြည်သူလူထု၏အမြင်နှင့် နားလည် လက်ခံထားမှု များကိုလေ့လာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။၂။ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုယ်စားပြုမှု။ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ထားမှုအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။၃။ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ််ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှု အပေါ် (Good Governance) များအပေါ်ဒေသခံပြည်သူတို့၏ အကဲဖြတ်ချက်များ လေ့လာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။၄။ လက်ရှိိကာလရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ််ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင် မှုအခြေအနေနှင့်ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးများ ပိုမိုကောင်းမွန်ရေး အကြံပြုချက်များကို လေ့လာ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ – ပြည်သူ အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် – လူထုလူတန်းစား(၆)လွှာ- ဝန်ထမ်း၊- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊- မှီခို၊- ကျောင်းသား၊- ကျပန်းစသည် တို့အားမေးမြန်းရယူခဲ့ပါသည်။ – စစ်တမ်းနှင့် သတင်းအချက် အလက်များရယူရာတွင်- တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်မြို့နယ် အာဏာပိုင်များ၏ခွင့်ပြချက်ဖြင့် – ဒေသခံအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းအကူအညီရယူ၍ ကွင်းဆင်းဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ – ဤအစီရင်ခံစာသည် ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းကိုသာ အဓိကလွှမ်းခြုံထားပါသည်။- ဖျာပုံ၊ဘိုကလေး၊ ကျိုတ်လတ်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ်များမှှ – မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ၊ကျေးရွာများကိုသတ်မှတ်ပြီး – (၄)မြို့နယ်ရှိမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်စုစုပေါင်း (၁၅) ရပ်ကွက်-ကျေးရွာခွဲပေါင်း(၃၆)ရွာတို့မှအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။ – (၄)Read More →
သံလွင်အဖွဲ့ကစီစဉ်တဲ့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတွေအပေါ် ဒေသခံပြည်သူတွေရဲဲ့ အမြင်သဘောထားနဲ့ အကြံပြုချက်တွေ၊ အသံတွေကို လေ့လာဖော်ထုတ်ထားတဲ့ ပြည်သူတွေပြောတဲ့ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေး အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်ကို ဦးစွာ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို မကြာမီတင်ပါမယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် လအနည်းငယ်နောက်ကျသွားရပါတယ်။ သံလြင္အဖြဲ႔ကစီစဥ္တဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြအေပၚ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲဲ႕ အျမင္သေဘာထားနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အသံေတြကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြေျပာတဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ဦးစြာ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကို မၾကာမီတင္ပါမယ္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လအနည္းငယ္ေနာက္က်သြားရပါတယ္ ။ Read More →
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ် (၂၅ . ၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ဥတိုကျေးရွာ၊ ကျုံဒူးဒါးမလိမ်းကျေးရွာနှင့် ဂွကလေးကျေးရွာတို့ရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်တို့အတွင်းရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းတံတားများအခြေအနေနှင့် သောက်သုံးရေကန်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၏အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေရေရရှိမှုအခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုုိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤသိုု့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ ဗော်လန်တီယာများ အားလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စိတ်ရှည်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါသော ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအားလည်းကောင်း၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ(ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္) ၂၅. ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၂၀။ သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚျပည္သူတို႔၏သေဘာထားအျမင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရုိင္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ (၂၅ . ၂. ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ဥတုိေက်းရြာ၊ က်ဳံဒူးဒါးမလိမ္းေက်းရြာႏွင့္ ဂြကေလးေက်းရြာတုိ႔ရွိ ျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္တုိ႔အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မိမိတုိ႔ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရး၊Read More →
စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ( ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ် (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀)
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ် (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကျုံကဒွန်းကျေးရွာနှင့် ကဇောင်းကျေးရွာတို့ရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၁၉) ရပ်ကွက်တို့အတွင်းရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းတံတားများအခြေအနေနှင့် သောက်သုံးရေကန်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၏အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေရေရရှိမှုအခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုုိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤသိုု့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ ရေလုပ်သားဖွံွ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စိတ်ရှည်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါသော ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအားလည်းကောင်း၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည် စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ(ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာ) သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚျပည္သူတို႔၏သေဘာထားအျမင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရုိင္၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ က်ဳံကဒြန္းေက်းရြာႏွင့္ ကေဇာင္းေက်းရြာတုိ႔ရွိ ျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၁၄)ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္(၁၉) ရပ္ကြက္တုိ႔အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မိမိတုိ႔ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရး၊Read More →
ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ( ဖျာပုံခရိုင်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်(၂ . ၂. ၂၀၂၀)
သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚျပည္သူတို႔၏သေဘာထားအျမင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရုိင္၊ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂ . ၂. ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မိမိတုိ႔ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းတံတားမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၏အေျခအေန၊ လယ္ယာေျမေရရရွိမႈအခက္အခဲမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤသုို႔ သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုအျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ႀကြစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ဦးရဲေအာင္(OMI)၊ ေဒသခံ ေရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူစဥ္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးပါေသာ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်တွင် (၂ . ၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာနေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းတံတားများအခြေအနေနှင့် သောက်သုံးရေကန်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၏အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေရေရရှိမှုအခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကိုုိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤသိုု့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့Read More →
ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (ဘိုကလေးမြို့နယ်/ ၃၀ . ၁. ၂၀၂၀)
သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚျပည္သူတို႔၏သေဘာထားအျမင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရုိင္၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀ . ၁. ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မိမိတုိ႔ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းတံတားမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၏အေျခအေန၊ လယ္ယာေျမေရရရွိမႈအခက္အခဲမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤသုို႔ သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုအျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ႀကြစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ဦးရဲေအာင္(OMI)၊ ေဒသခံ အလင္းတန္းအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(RDO) တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူစဥ္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးပါေသာ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် (၃၀ . ၁. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာနေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းတံတားများအခြေအနေနှင့် သောက်သုံးရေကန်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၏အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေရေရရှိမှုအခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကိုုိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤသိုု့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသောRead More →
လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း(ဒေးဒရဲမြို့နယ်/ကျေးရွာ) သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ဥတိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျိုက်လတ်ကလေးကျေးရွာ၊ ဆူးကလပ်ချောင်းဝကျေးရွာနှင့် ဥတိုရွာမကျေးရွာသို့(၇-၈ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀)ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊ ကျုံဒူးဒါးမလိမ်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ညောင်ကားယားကျေးရွာ၊ အောက်ကွင်းကျေးရွာနှင့် ကျုံဒူးဒါးမလိ််မ်းရွာမ ကျေးရွာများသို့ (၉ -၁၀ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊ ဂွကလေးကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ ပျော်ဘွယ်စုကျေးရွာနှင့် ဂွကလေးရွာမကျေးရွာများသို့ (၁၀ – ၁၁ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊ လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၇. ၁. ၂၀၂၀ မှ ၁၂. ၁. ၂၀၂၀၊ ထိ ) ၆ ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ဒေးဒရဲနှင့် ဖျာပုံမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးရွာများနှင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင် ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိ ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အလင်းတန်းအဖွဲ့(ဘိုကလေး)၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(ဘိုကလေး)၊ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(ကျိုက်လတ်)၊ ဒေးဒရဲ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံများ ကတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း(ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာ) သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတုိေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ က်ဳိက္လတ္ကေလးေက်းရြာ၊ ဆူးကလပ္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာႏွင့္ ဥတုိရြာမေက်းရြာသို႔(၇-၈ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၂၀)ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ဳံဒူးဒါးမလိမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေညာင္ကားယားေက်းရြာ၊ ေအာက္ကြင္းေက်းရြာႏွင့္ က်ဳံဒူးဒါးမလိ္္မ္းရြာမ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ (၉ -၁၀ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂြကေလးေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ရွမ္းစုေက်းရြာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္စုေက်းရြာႏွင့္ ဂြကေလးရြာမေက်းရြာမ်ားသုိ႔ (၁၀Read More →
လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖျာပုံမြို့နယ်/ကျေးရွာ(19- 24. Dec,2019)
သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ က်ဳံကဒြန္းေက်းရြာႏွင့္ ကေဇာင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ( ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၉ မွ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၆ ရက္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ စစ္တမ္းကို ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ဳိက္လတ္၊ ဘုိကေလး၊ေဒးဒရဲႏွင့္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုစစ္တမ္းကိုေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကတက္ႀကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကျုံကဒွန်းကျေးရွာနှင့် ကဇောင်းကျေးရွာများသို့ လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၉ မှ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၆ ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ဒေးဒရဲနှင့် ဖျာပုံမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ဒေသခံ ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များကတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။Read More →
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ အစုကြီးကျေးရွာ၏ အစုကြီးရွာမ၊ ကျုံမငေး၊ ဆွေတော်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ။ ကြံခင်းပန်းပဲစုကျေးရွာ၏ ကြံခင်းပန်းဘဲစုရွာမ၊ စက်ကုန်း၊ ကျုံပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုးများ။ ရုံးဒေါင့်ကျေးရွာ၏ ရုံးဒေါင့်ရွာမ၊ သဲကုန်း၊ ဗလီချောင်ကျေးရွာအုပ်စုများ)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၃. ၁၂. ၂၀၁၉ မှ ၈. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၅ ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များနှင့် ကျေးရွာများတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံနှင့် ဘိုကလေးကျေးရွာတို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များကတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ (က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အစုႀကီးေက်းရြာ၏ အစုႀကီးရြာမ၊ က်ဳံမေငး၊ ေဆြေတာ္စု ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား။ ၾကံခင္းပန္းပဲစုေက်းရြာ၏ ႀကံခင္းပန္းဘဲစုရြာမ၊ စက္ကုန္း၊ က်ဳံပိုင္း ေက်းရြာအုပ္စုးမ်ား။ ရုံးေဒါင့္ေက်းရြာ၏ ရုံးေဒါင့္ရြာမ၊ သဲကုန္း၊ ဗလီေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား)အတြင္း လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ( ၃. ၁၂. ၂၀၁၉ မွ ၈. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၅ ရက္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ စစ္တမ္းကို ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ဳိက္လတ္၊ ဘုိကေလး၊ ေဒးဒရဲႏွင့္ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်ဳိက္လတ္၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပုံႏွင့္ ဘုိကေလးေက်းရြာတို႔တြင္ေကာက္ယူၿပီးစီးခဲ့သည္။ ယခုစစ္တမ္းကိုေကာက္ယူရာတြင္ ေရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကတက္ႀကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာRead More →
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ပိုက်စလပ်ကျေးရွာ၏ ဝက်ကော်၊ ၀ါးနက်ကုန်း၊ ပိုက်စလပ် ကျေးရွာအုပ်စုများ။ စက်ဆန်းကျေးရွာ၏ အမှတ် ၁ နယ်မြေ၊ အောင်ချမ်းသာ၊ ပုဏ္ဏရိပ် ကျေးရွာအုပ်စုးများ။ ဂရန်းကျေးရွာ၏ ရွာမ၊ ရွာသစ်၊ သာယာကုန်းကျေးရွာအုပ်စုများ)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉ မှ ၂. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ခြောက်ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များနှင့် ကျေးရွာများတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံနှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ် တို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် အလင်းတန်းလူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များကတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ အလင်းတန်းလူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ (ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္စလပ္ေက်းရြာ၏ ၀က္ေကာ္၊ ၀ါးနက္ကုန္း၊ ပိုက္စလပ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား။ စက္ဆန္းေက်းရြာ၏ အမွတ္ ၁ နယ္ေျမ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ ပုဏၰရိပ္ ေက်းရြာအုပ္စုးမ်ား။ ဂရန္းေက်းရြာ၏ ရြာမ၊ ရြာသစ္၊ သာယာကုန္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ား)အတြင္း လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ( ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉ မွ ၂. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ေျခာက္ရက္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ စစ္တမ္းကို ဖ်ာပုံခရုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ဳိက္လတ္၊ ဘုိးကေလး၊ ေဒးဒရဲႏွင့္ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်ဳိက္လတ္၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပုံႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ေကာက္ယူၿပီးစီးခဲ့သည္။Read More →
သံလွင် (Citizen Empowerment Program) ကို မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဒီမိုက ရေစီအလေ့အထများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်သူများမှာ ဦးသီဟသူ(ဦးဆန်နီ) (Social development worker)၊ ဆရာနေဘုန်းလတ်(Blogger)၊ ဒေါတ်တာရန်မျိုးသိမ်း(Political Commentator/Analyst)၊ ဦးဇော်မင်းကျော်(ပြည်သွေးနိုင်၊ ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း)နှင့် ဒေါ်ခင်လေး(Triangle Women’s Support Group) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
Than Lwin (Citizen Empowerment Program)
154. (4storey)Bogyoke Aung San Rd,(Cor of 46 St) Puzundaung Tsp, Yangon.
Copyright © 2016 Than Lwin